Kaontenera anaty akany
Fitaovana mihantona vy
Panelan'ny rindrina mitaingina rindrina
Fiorenana ambony ambany
Bin talantalana & Kabinetra
Fitaovana tariby miaraka amin'ny talantalana Shelfull
Fitaovana tariby miaraka amin'ny talantalana
Fitaovana tariby miaraka amin'ny fitoeram-bokatra
Trolley mitaingina tariby miaraka amin'ny talantalana Shelfull
Trolley mitaingina tariby miaraka amin'ny talantalana
Trolley mitaingina tariby miaraka amin'ny fitoeram-bokatra
Fitaovana vy miaraka amin'ny talantalana Shelfull
Kabinetra miaraka amin'ny talantalana Shelfull
Cabinet amin'ny talantalana
Miaraka amin'ny varavarana
Tsy misy varavarana
Sarety sy saribakoly
Sarety tanana tsy mitabataba
Tanana tsy miovaova
Tanana tsy azo aforitra
Palety azo itobiana
Pallets azo sintomina
TATRATRA INJECTION CUSTOM
Vokatra vita amin'ny CUSTOM METAL
FAMONJANA PRODUKA CUSTOM, COLOR ..
PROGRAMA PROCESSING OEM
Azo ampiasaina amin'ny marikao, hanokatra lasitra manokana ho an'ny famokarana OEM izahay.
azo namboarina araka ny santionany omenao
azo namboarina araka ny habeny omenao
azonao atao ny mampiasa ny baoritra fonosana ivelany, ny vokatra anatiny avy amiko hamita ny famokarana
NAHOANA NO MAFIDY NY PROSESY QINGDAO GUANYU OEM
1. Orinasa manamboatra
2.Ny indostrian'ny plastika dia manana traikefa fanamboarana 20 taona
3.Ny orinasa dia manana laza tsara ary miaro ny endrik'ilay marika amin'ny faran'ny farany indrindra.
4. Ekipa mpamolavola haavo avo lenta miaraka amina vanim-potoana iasana maherin'ny 7 taona no manome fanohanana ara-teknika.
5.Can manome anao ny vahaolana logistics sy fitaterana mety indrindra ary manome serivisy fanjairana
6.Tena feno ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana avy amin'ny akora plastika ka hatramin'ny vokatra vita. Ny fonosana voalohany Exxon Mobil PP polyethylene dia ampiasaina ho akora fototra, miaraka amin'ny fotoana fohy sy ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, izay ahazoana mandanjalanja tsara eo anelanelan'ny hamafin'ny vokatra sy ny fanoherana ny fiantraikany.
7. Vondronà mpiasa mahay manana traikefa mihoatra ny 3 taona dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mitsitsy akora simika hampihena ny vidiny. 8. Azo namboarina ho an'ny pirinty isan-karazany, fanoratana, Logo thermoprint
* Ka rehefa mila fitaovana masinina mazava tsara ianao hamokarana singa plastika nefa tsy manana loharanon-karena hanamboarana azy ianao dia mifandraisa aminay. Na mila endrika na vonona hamokarana ianao dia manana serivisy serivisy feno hatolotra.
Ekipa R & D EXCELLENT
wn ekipa matihanina injeniera sy mpamolavola, izay afaka manamboatra endrika manokana hamaly ny filàna manokana ary hamolavola hatrany ny famolavolana vokatra vaovao.
MIHEVITRA 20 TAONY
Hatramin'ny 1997, dia manome serivisy OEM ho an'ny mpanjifa any amin'ny firenena 60, toa ny Akro-Mils, Grainger, Amazon, sns. Ny ankamaroan'ny vokatra OEM dia mahazo patanty.
Misy teknisianina matihanina miisa 5 ao amin'ny laboratoara.
Ny kalitao no soatoavinay fototra. Avy amin'ny akora hatramin'ny faran'ny famokarana dia nampihatra ny rafitra fifehezana kalitao faran'izay henjana indrindra izahay. Ny santionan'ny vokatra dia hararaotin'ny laboratoara. Ny fomba famokarana rehetra sy ny fomba fitsapana dia tanterahina mifanaraka amin'ny fanao indostrialy sy ny fenitra iraisam-pirenena.
Adiresy: No.624, Qingshan Road, Qingdao, Sina
Tavoahangy plastika mifatotra, Fametrahana fantsom-pifidianana, Fametahana fitoeram-bokatra, Tranon-tahiry azo itehina, Bins fitehirizana plastika azo stackable, Stack & Hang Bins,